Android မှာ Installation လုပ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်
iSpyoo Monitor ကိုလျှောက်လွှာ
File ကိုခေါ်ရန်မှတ်တမ်းတင် Play လုပ်နည်း (MP4,)
Device ကို Root လုပ်နည်း
Android / iOS ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းသူလျှို
iSpyoo မိုဘိုင်းသူလျှို App ကိုအခမဲ့ဆုံးသောအအစွမ်းထက်သူလျှိုဖုန်းဆော့ဝဲ Is. သားသမီးတွေကိုထိုအဝန်ထမ်းများစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု.
iSpyoo မိုဘိုင်းသူလျှို App ကိုအဆိုပါအတိအကျတည်နေရာ Monitor နိုင်သလား, cell ဖုန်းနံပါတ်သူလျှို App ကို, Android အတွက်သူလျှို App ကို, မှတ်တမ်းတင်အခမဲ့ Call, သူလျှို Whatsapp, SMS စာတို Tracker, အခမဲ့အကြောင်းမူကားသူလျှိုခေါ်ရန်
အိုင်တီ Magic IS? NO, ဒါဟာတကယ်ကောင်းတယ်နည်းပညာ'S
ကောင်းစွာ, မဟုတ်တော့ပါဘူး. iSpyoo နှင့်အတူ, အာဏာအရှိဆုံးဆဲလ်ဖုန်းသူလျှို software ကို, သငျသညျအဝေးမှနှင့်မျက်မြင်မရတဲ့နည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ကြည့်နိုင်, မိနစ်အတွင်းနဲ့ကော်ဖီခွက်၏ကုန်ကျစရိတ်တစ်ရက်မှာ!
မိုဘိုင်းသူလျှို App ကို
FROM မှမယ့်အပတ် License $16.99
ကျနော်တို့ကိုလည်းအခမဲ့ဆက်ကပ် 48 အပြည့်အဝ features တွေနှင့်အတူနာရီ. iSpyoo မိုဘိုင်းသူလျှိုအခမဲ့အွန်လိုင်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်ခဏ Download!
NOW က ISPYOO ဝယ်
Android မှာ Devices
iSpyoo သင်၏သားသမီးတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, သငျသညျကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်ကိုပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ရှိသည်သောစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း device ပေါ်မှာန်ထမ်းသို့မဟုတ်အခြားသူများ. သင်သည်သူတို့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်းသောကိရိယာ၏အသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်သည်. iSpyoo app ကိုကသူတို့ရဲ့အရွယ်မရောက်သေးသည့်ကလေးငယ်များစောင့်ကြည့်ဖို့လိုသူမိဘများအတွက်သို့မဟုတ်သူတို့၏ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏န်ထမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ဆန္ဒရှိသောအလုပ်ရှင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. ထို iSpyoo software ကိုဝယ်စမတ်ဖုန်းပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ install လုပ်မီကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်သို့ iSpyoo app ကိုသက်ဝင်စေဖို့ကိုခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးရန်သူတို့သားသမီးသို့မဟုတ်န်ထမ်းများထံမှခွင့်ပြုချက်ရေးထားပြီရပါမည်
မိုဘိုင်း operating system လိုအပ်ချက်များ
iSpyoo ကို Android များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သူလျှိုဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. Android အတွက်ဗားရှင်းစာသားမက်ဆေ့စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်စွမ်းလည်းပါဝင်သည်, ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ပျောက်အတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့် GPS တည်နေရာကိုပဌနာ. ဒါဟာ Android OS ကို၏သဟဇာတဗားရှင်းတွေကို run နေအများဆုံး Android ထုတ်ကုန်နှင့်အတူလက်ရှိတွင်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်. Mobile ကသူလျှိုထို့ပြင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်းက Android သူလျှိုဖြစ်ပါသည်! iSpyoo Android မှာများအတွက်အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါ:
website ကသမိုင်းကို, Installed apps များ, Block ကို 's Apps, Gmail ကို, cell ID ကို, ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, သစ်လုံး Call, GPS တည်နေရာ OR ဆဲလ် ID ကိုတည်နေရာများကို, စံချိန်ပတ်ဝန်းကျင်, ကိုယ်ပျောက်ကင်မရာ, Facebook က Messenger ကို, Twitter ကို Messenger ကို, WhatsApp ကို Messenger ကို, auto Update ကို, SMS စာတိုစစ်ဌာနချုပ် Capability, ဆက်သွယ်ရန်စာရင်းများ, ဓါတ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ (ဖုန်းကိုယူ), ဆဲဆိုသတိပေး, ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုအချက်ပေး, custom အချက်ပေးတဲ့ Keyword, ဆက်သွယ်ရန်အချက်ပေး, Geo-ခြံစည်းရိုးအချက်ပေး
Verizon အသိပေးခြင်း: သင့်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို Verizon လိုလျှင်, သငျသညျ ရပါမည် မိုဘိုင်းသူလျှိုများ၏ GPS စနစ်ခြေရာခံနိုင်တဲ့ feature ကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ GPS န်ဆောင်မှုမှ subscribe. သင်သည်သူတို့၏ GPS စနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ subscribe ဘူးဆိုရငျ,iSpyoo ပါလိမျ့မညျ မဟုတ်ပါ အဆိုပါ monitor device ရဲ့ GPS တည်နေရာကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မည်. iSpyoo ယခုမှာ Android tablet များနှင့်အတူ OS ကိုအပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ် 2.2 နှင့်ပွင့်!
iSpyoo iPhone အတွက်ဦးဆောင်သူလျှိုဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်, iPad နှင့် iPod ကို. စာသားမက်ဆေ့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်, ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ပျောက်မှာသူတို့ရဲ့ Apple ၏ iPhone ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့် GPS တည်နေရာကိုပဌနာ, ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုအလုပ်မ. ဖုန်းကိုဒေတာအစီအစဉ်ရှိရမယ် & ဒါကြောင့်မိုဘိုင်းသူလျှိုဆော့ဖ်ဝဲများကိုသင့်ရဲ့အကောင့်ကို log များ upload တင်လို့ရပါတယ်တစ်ခုအင်တာနက် connection. Mobile ကသူလျှိုကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး iPhone ကိုသူလျှိုဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်! iSpyoo iPhone / iPad များအတွက်အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါ:
website ကသမိုင်းကို, ဓါတ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ (ဖုန်းကိုယူ), ဆဲဆိုသတိပေး, ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုအချက်ပေး, custom အချက်ပေးတဲ့ Keyword, ဆက်သွယ်ရန်အချက်ပေး, Geo-ခြံစည်းရိုးအချက်ပေး, SMS စာတိုစစ်ဌာနချုပ် Capability, ဆက်သွယ်ရန်စာရင်းများ, Gmail ကို, မူလတန်း E-mail ကို inbox ရဲ့, YouTube ကဗီဒီယို, auto Update ကို, Facebook က Messenger ကို, WhatsApp ကို Messenger ကို, bookmarks (Safari က), Daily သတင်းစာသို့မဟုတ် Weekly ဂျာနယ်က New မှတ်တမ်းများစာရင်းအင်းများ, Recovery ကို (Lock, Data ကို Wipe, ဂျီပီအက်စ်), ပြက္ခဒိန်အဖြစ်အပျက်များ, memo မှတ်တမ်းများ, Installed apps များ, Block ကို 's Apps, မှတ်တမ်းများကအီးမေးလ် Get, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ - iPhone ကိုသာလျှင်, iMessage, သစ်လုံး Call - iPhone ကိုသာလျှင်, GPS တည်နေရာ, စံချိန်ပတ်ဝန်းကျင်, ကိုယ်ပျောက်ကင်မရာ.
အဘယျသို့ Clients တွေအနေနဲ့ဆိုရမည်မှာ
ငါသည်ငါ့န်ထမ်း cheat ဖမ်းမိခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စာရင်း sharing. iSpyoo ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါအီးမေးလ်များရှိခဲ့ပါတယ်, BBM စကားပြောဆိုချက်နှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများအပေါင်းငါသူတို့လာရောက်လည်ပတ်သောအခါ iSpyoo ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းခြေရာခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်များမှုကြောင့်ခဲ့ကြအတိအကျဘယ်သူကိုသိခဲ့.
အာဒံက HustonCEO ဖြစ်သူ Company မှ
သင်အမှန်တကယ်ဟူသောစကားလုံးများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့ဘယ်တော့မှ "စိုးရိမ်" သငျသညျမိဘတစ်ဦးဖြစ်လာသည့်တိုင်အောင်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေသူတို့အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်ကြပြီးသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပြုနိုင်သည်ကိုစဉ်းစား - ငါသူတို့ရင့်ကျက်နေကြသည်ယုံကြည်ပါတယ်ချင်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကသာဆောင်ကြဉ်း doub.
ကြှနျုပျတို့အားလုံးဗိုလ်မှူး Credit Card Accept
iSpyoo Monitor ကို App ကို
© 2010-2016 iSpyoo LLC အားဖြင့်, မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်.
iSpyoo အဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် သင်၏သားသမီး monitoring, တစ်ဦးအပေါ်န်ထမ်းသို့မဟုတ်အခြားသူများ စမတ်ဖုန်းကို သို့မဟုတ် မိုဘိုင်း device သငျသညျကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်ကိုပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ရှိသည်သော. သင်သည်သူတို့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်းသောကိရိယာ၏အသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်သည်. iSpyoo app ကိုကသူတို့ရဲ့အရွယ်မရောက်သေးသည့်ကလေးငယ်များစောင့်ကြည့်ဖို့လိုသူမိဘများအတွက်သို့မဟုတ်သူတို့၏ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏န်ထမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ဆန္ဒရှိသောအလုပ်ရှင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. ၏ဝယ် iSpyoo app ကိုစမတ်ဖုန်းပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ install လုပ်မီကစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးရန်သူတို့သားသမီးသို့မဟုတ်န်ထမ်းများထံမှခွင့်ပြုချက်ရေးသားစမတ်ဖုန်းပေါ်သို့ iSpyoo app ကိုသက်ဝင်စေဖို့ကိုဖြစ်ရမယ်.
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျသူလျှို | Android အတွက်သူလျှို | iPhone ကိုသူလျှို | Phone အတွက်သူလျှို app ကို | mobile phone သူလျှို | Facebook ကသူလျှို | Viber ကိုသူလျှို | Skype ကိုသူလျှို | Whatsapp Sp​​y